बाढी र पहिरोको वितण्डा :काठमाडौंमा ३ सहित देशभर १४ जनाको ज्यान गयो,कुन् जिल्लामा कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बाढी र पहिरोको वितण्डा :काठमाडौंमा ३ सहित देशभर १४ जनाको ज्यान गयो,कुन् जिल्लामा कति ?
काठमाडौं । बिहीबारदेखि सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण ११ भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने ८ भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको मूलपानीमा पहिरोमा परी ३ जनाको ज्यान गएको छ ।
काठमाडौंमा चार जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने एक जना वेपत्ता भएका छन् । काठमाडौंका मूलपानीमा एक घरको पर्खाल भत्कदाँ टहरामा बसिरहेका एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसै ललितपुरमा एक जनाको ज्यान गएको छ । काठमाडौंको बल्खु खोलाले बगाउँदा एक जना बेपत्ता भएका छन् ।
त्यस्तैगरि पर्सा, भोजपुर, रामेछाप, सिन्धुलीमा १र१ जनागरि ४ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै काभेमा २ जनाको ज्यान गएको छ भने धादिङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै देशभर गरेर ८ जना बेपत्ता भएका छन् भने १४ जना घाइते भएका छन् ।
करोडौं अनियमितता गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी पक्राउ
काठमाडौँ,करोडौं अनियमितता गरेको अभियोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्र्तगतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका […]
‘वेफिक्रे’मा रणवीर र बाणीले गरे २३ पटक चुम्बन
यस्तो लाग्दैछ, बलिउडका चर्चित निर्देशक आदित्य चोपडा आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘वेफिक्रे’मा चुम्बनको बर्षा […]
यस्तो छ स्तन बढाउने उपाय
म स्रोह वर्षीया युवती हुँ । मलाई ज्ञान भएअनुसार महिलाको स्तन विकास १४ देखि १६ वर्षभित्रमा भैसक्छ । यो अङ्ग […]
६४ वर्षीया महिलाको खुकुरी प्रहारबाट अर्की एक महिलाको मृत्‍यु
फागुन ३ ।चौतारा,सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी गाविसमा ६४ वर्षीया महिलाको खुकुरी प्रहारबाट अर्की एक महिलाको […]
भैरव पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौँ । प्रसिद्ध हास्यव्यङ्ग्यकार स्व भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापित भैरव पुरस्कार चट्याङ मास्टर […]